Shir Amniga Looga Hadlayey Oo Lagu Soo Gebogabeeyay Doolow, Gedo – Goobjoog News
Degmada Doolow ee gobolka Gedo waxaa lagu soo gebogabeeyey shir Saddex maalin socdey oo looga hadlayey amniga guud ee gobolkaasi, waxaana ka qeybgalay wasiiro Jubbaland ah, saraakiil iyo xubno ka tirsan maamulka Gobolka Gedo.
Cali Xasan Deer, taliyaha Nabad sugidda gobolka Gedo oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in shirkan uu ahaa mid aad u muhiim ah, islamarkaana ay soo qabanqaabisey wasaaradda amniga maamulkaasi.
Waxa uu sheegay taliyaha in waxyaabaha shirka diiradda lagu saarey ay kamid tahay xoojinta amniga, tayeenta ciidamada Jubbaland ee Gedo, sidii loola dagaallami lahaa Al-shabaab iyo sidoo kale sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen dhammaan maamullada degmooyinka Gedo.
“Shirkaan waxaa soo qabanqaabisey wasaaradda amniga Jubbaland, waxaana isugu yimid wasiirka wasaaraddaasi, guddooomiyeyaasha degmooyinka gobolka iyo saraakiisha ciidamada, waxaana diiradda lagu saarey teyeenta ciidamada Jubbaland ee Gedo, dagaallada Nabad diidka lagula jiro iyo sidii loo xoojin lahaa iyo sidoo kale in ciidamada degmooyinka iyo maamulladaba ay wada shaqeeyaan” ayuu yiri Taliyaha.
Kulankan ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyey amniga gobolka Gedo faraha kasii baxayey, waxaana gobolkaasi ka dhacayey weeraro ay fuliyeen Al-shabaab.